The new SR 99 tunnel under downtown Seattle - Somali - Diyaar garow: saddex-todobaad SR 99 xidhidu waxey bilaabmaysaa Jan. 11, 2019 | WSDOT
Realign99 highway closure
SR 99 Grand Opening Celebration
Using the tunnel videos (English, Español)
Get ready: three-week SR 99 closure begins Jan. 11, 2019
Chinese - 准备就绪：于 2019 年 1 月 11 日开始对 SR 99 进行为期三周的封闭
Spanish - Prepárese: la clausura de tres semanas de la SR 99 comienza el 11 de enero de 201
Vietnamese - Chuẩn bị Sẵn sàng: giai đoạn đóng SR 99 ba tuần bắt đầu ngày 11 tháng 01 năm 2019
Travel alternatives during approximate three-week SR 99 closure
Chinese - 近三周 SR 99 封闭期间的出行备选
Spanish - Alternativas de viaje durante la clausura de aproximadamente tres semanas de la SR 99
Vietnamese - Các phương án đi lại thay thế trong khoảng ba tuần SR 99 bị đóng
homeAlaskan Way Viaductthe new SR 99 tunnel under downtown SeattleSomali - Closure details
Diyaar garow: saddex-todobaad SR 99 xidhidu waxey bilaabmaysaa Jan. 11, 2019
Maxay: Xidhitaanka saddex-todobaad SR 99 iyo ilaa lix todobaad oo saameyn saxmadeed ah
Marka tunnelka cusub ee SR 99 uu diyaar u yahey in la furo, WSDOT waxey u baahan doontaa iney xidho wadada qiyaas ahaan sadex todobaad si dib loogu hagaajiyo SR 99 tunnel. Waxaa la xidhi doonaa inta u dhaxaysa dhamaadka koonfureed ee Tunnelka Battery Street ilaa West Seattle Bridge. Waxaa jiri doona ilaa sadex todobaad oo xidhid dalcad oo dheeraad ah kahor iyo kadib xidhitaanka sadexda todobaad.
Dhamaan SR 99 gudaha- iyo dibada-dalcada waa la xidhi doonaa inta u dhaxeysa West Seattle Bridge iyo Tunnelka Battery Street. Gudaha-iyo dibada-dalcada ee Galbeedka Avenue wuu furnaan doonaa inta lagu jiro xidhida.
Hal todobaad kahor xidhitaanka
Dalcadaha southend ee bixiya helida ilaa 1-5 iyo 1-90 way xidhanyihiin hal todobaad kahor xidhida buuxda.
Hal ilaa laba todobaad kadib xidhida
Kadib tunnelka cusub ee SR 99 la furo xidhada waqooyigu dalcadakabaxsan ilaa suuqa hoose ayaa xidhanaan doona ilaa laba todobaad.
Maxeynu uga baahanahey ineynu xidhno wadada?
Hagaajintan imika ee SR 99 ee u dhow garoonka waa ku meel gaadh, kaasoo ogolaanaya saxmada iney ku socdaalaan aag dhisme oo socda. Kooxo waa iney ka shaqeeyaa hagaajintan si ay isugu xidhaan SR 99 ilaa tunnelka cusub. Xidhitaankani lama awoodi karayo iyadoo ay ugu wacan tahey xadiga shaqada ee badan ee la xidhiidha dib u hagaajinta SR 99. Sawirada hoose waxey ku tusayaan wadada SR 99 ee maanta (huruud) iyo aagaga shaqada inta lagu jiro xidhida (liimi).